Izitali zaseKiltanon House Tulla Clare V95 A3W6
Uvimba sinombuki zindwendwe onguPaul & Joan
I-Kiltanon Stables yindawo yokutyelela i-Burren, amawa e-Moher, i-Wild Atlantic way Clare, i-Galway kunye ne-Limerick. Iziqulethwe ngokupheleleyo .. Inoxolo, inomlingo, ishushu. Le ndawo intle yokurhoxa ikwiikhilomitha ezimbini ukusuka kwilali yaseTulla.
Esi sisimo esikhethekileyo kumhlaba weKiltannon House. Inobomi obulula bobomi bale mihla kunye nomtsalane wexesha elidlulileyo. Inomoya kunye nomlingiswa kwaye ikwindawo nje nge-20 kaMeyi. Isecaleni kwe-Lodge esele ifumene uphononongo lweenkwenkwezi ezi-5. Ibamba elifanayo kwindawo enye kodwa uguqulo oluhle kakhulu lwezitali zeVictorian.
4.94 · Izimvo eziyi-415
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi415
Ubumelwane busemaphandleni kwaye umhlaba weefama unwenwele kangangoko ubona. Imiqolomba yaseToomeen yimizuzu emi-5 yokuhamba. Iindlela ezinkulu zelizwe ukubaleka okanye ukuhambahamba ngokuzolileyo. I-Tulla yi-3 Kms kunye ne-Ennis malunga ne-12 km. U-Ennis uneendawo zokutyela ezikwiklasi yokuqala, ithiyetha e-Glor, umculo wesintu kwi-Old Ground Hotel kunye ne-boutiques, iivenkile ze-gourmet nokunye okuninzi.
Umbuki zindwendwe ngu- Paul & Joan
UJoan noPaul bayakuthanda ukudibana neendwendwe kwaye babakhokele kwezona ndlela zilungileyo ngokunxulumene nohambo lwemini, ukutya, iimarike, izinto zakudala kunye neegalari. Kukho into yomntu wonke kwi-County Clare. Basondele kakhulu kwaye baya kunceda kuwo nawuphi na umbuzo okanye ingxaki . Ungalibazisi ukunkqonkqoza emnyango nokuba yincoko nje. Nangona kunjalo, bayayihlonipha imfihlo yeendwendwe zabo kwaye bashiya iindwendwe ezininzi ukuba zonwabele ixesha labo njengoko benqwenela.
UJoan noPaul bayakuthanda ukudibana neendwendwe kwaye babakhokele kwezona ndlela zilungileyo ngokunxulumene nohambo lwemini, ukutya, iimarike, izinto zakudala kunye neegalari. Kukh…
UPaul & Joan yi-Superhost